ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဟာ သင့်ရဲ့အသားအရေကို ပျက်စီးစေနိုင် ~ Myanmar Online News
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဟာ သင့်ရဲ့အသားအရေကို ပျက်စီးစေနိုင်
9:31 PM ကျန်းမာရေး No comments
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်နေလိမ့်မယ်။ Candy Crush လို ဂိမ်းတွေကလည်း သင့်ကိုဆွဲဆောင်ထားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေနဲ့ ထိတွေ့နေရခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်က အသားအရေ ပျက်စီးတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့ ဘယ်ထည့်တွေးမိမလဲနော်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေနဲ့ သင့်အသားအရေ ဘယ်လိုဆက်စပ်မှုတွေ ရှိနေသလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။၁။ဆိုရှယ်မီဒီယာဟာ သင့်ကို ပိုမိုရင့်ရော်စေပါတယ်။
ကွန်ပျူ တာရှေ့မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ ဆွဲဆောင်အားတစ်ခုခုကြောင့် နာရီပေါင်းများစွာ အချိန်ဖြုန်းမိပြီဆိုတာနဲ့ သင်ဟာ အိုမင်းရင့်ရော်စေမယ့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ် ရောက်နေပြီလို့သာ မှတ်လိုက်ပါ။ အာရုံစိုက်ရလွန်းတဲ့ မျက်လုံးအောက် နားက အရစ်ကလေးတွေ တဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အချိန် မရောက်ခင် သင်လုပ်ရမှာက ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက် အချိန်ပေးခြင်းကို လျှော့ရင်လျှော့၊ မလျှော့နိုင်ရင်တော့ eye cream တွေသာ ဆောင်ထားပေးတော့။
၂။Selfie ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ တင်ခြင်းကလည်း အရေပြား ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်နေတာပါပဲ။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Selfie ဓာတ်ပုံရိုက်တင်တာနဲ့ အသားအရေ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘာများ ပတ်သက်နိုင်သလဲဆိုတာ တွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Selfie ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာ စိတ်အစွန်းရောက်မှုနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ စိတ်ကျန်းမာရေးသုတေသီက ပြောထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ဆိုက်ကိုကတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ selfie ပုံတွေရိုက်တင်ပြီး ရလာတဲ့ Like အရေအတွက်အပေါ် စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲ။ စိတ်ကျန်းမာရေးဟာ အသားအရေလှပခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ စိတ်ညစ်တဲ့အခါ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ အသားအရေခြောက်သွေ့တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့အခါ၊ ကိုယ်စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါ ကိုယ့်အသားအရေကို သတိထားပြီး ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ စိတ်အခြေအနေကိုလိုက်ပြီး အသားအရေ ကြည်လင်မှုရှိတာ၊ မရှိတာ ကွဲပြားသွားပါတယ်တဲ့။
၃။သင့်နဲ့ သင့်ရဲ့ smartpohone နဲ့ အတူတကွ မရှိတဲ့အခါ စိတ်မတည်ငြိမ်ခြင်း ဖြစ်ခြင်းကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်သွားတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် အပြင်သွားတဲ့အခါ ဖုန်းအိမ်မှာကျန်ခဲ့ပြီဆိုရင် စိတ်မှာ ဘာလိုနေလို့ လိုနေမှန်းမသိသလို နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်ရတော့တာပါပဲ။ Nomophobia လို့ခေါ်တဲ့ ကြောက်စိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့အမျှ သင့်ရဲ့အသားအရေမှာလည်း အရင်ထက် ခြောက်သွေ့တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိုးရိမ်လွန်ကဲမှုကြောင့် အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်ဖို့လည်း အလားအလာရှိနေပြန်ပါတယ်။
၄။ဖုန်းမှာကပ်နေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့် ၀က်ခြံတွေ ပေါက်နိုင်။
ဖုန်းကို ကိုယ်နဲ့မခွာ ယူတတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့် အိမ်သာထဲဆိုလည်း ဖုန်းယူသွားလိုက်တာပါပဲ။ ဘယ်သွားသွား ဖုန်းယူသွားပြီး ဟိုတင်၊ ဒီတင်နဲ့ ဖုန်းမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ကပ်နေတတ်တာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီဖုန်း screen နဲ့ မျက်နှာနဲ့ကပ်ပြီး ဖုန်းပြောလိုက်လို့ကတော့ မျက်နှာမှာ အဖု၊ အပိန့် နဲ့ ၀က်ခြံတွေ ထွက်ပြီပေါ့။
၅။ဘေးမှာထားအိပ်တတ်တဲ့ ဖုန်းကြောင့် အိပ်ရေးမ၀တာ။
ညအိပ်ခါနီးဆို ဖုန်းကို ဘေးနားယူအိပ်တတ်တာကလည်း အသားအရေအတွက် ထိခိုက်စေတာပါပဲ။ အဓိကအားဖြင့် ဖုန်းဘေးမှာရှိနေတဲ့အခါ ဖုန်းပိတ်ထားတာ မဟုတ်ရင် စိတ်မချတဲ့ ခံစားချက်မျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သန်းခေါင်ယံ တရေးနိုးလို့ ဖုန်း screen ကို ကြည့်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုရှယ်နယ်ဝက်ခ်လေးထဲ ၀င်ကြည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံးကြောင်သွားတတ်ပြီး ပြန်အိပ်နိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အိပ်ရေးမ၀တဲ့အခါ အသားအရေ လှပခြင်းဆိုတာလည်း ရှိနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလေ။
► 2020 (6789)
မေမြတ်နိုး Miss Asia Pacific World 2014 မယ်သရဖူ ဆွ...
ဦးပိုင် အတွက် လစာဖြတ်တောက်မှု အောက်ခြေ စစ်သည်များ ...
ထိုင်းစစ်ဗိုလ် နဲ့ ဗမာစစ်ဗိုလ် နှိုင်းယှဉ်ချက်
ဆွဲဆောင်မှု ပြင်းပြကြောင်း လှစ်ဟပြလိုက်သည့် ကင်မ်ဘာ...
Maleficent ဇာတ်ကားပွဲဦးထွက်ပြသပွဲမှာ တိုက်ခိုက်ခ...
●မြန်မာ့နွေဦး ဖြစ်နိုင်ချေ(၄)ခုနှင့် ၂၀၁၅ မျက်မှေ...
ဘဝမှာ ဘာအရေးအကြီးဆုံးလဲ ????
X-Men: Days of Future Past ကြည့်တဲ့အခါ လွတ်သွားနို...
Khin Lay Nwe
Maxim ၏ ကမ္ဘာ့ညှို့ဓာတ်အပြင်းဆုံး အမျိုးသမီး ကန်ဒို...
ဗန်းမောက်မြို့နယ် နောင်ကွတ်ကျေးရွာတွင် မီးလောင်မြှု...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားမဝင် နေထိုင်သော တရုတ်နိုင်ငံ...
ကလေးသူငယ် လိင်ကုန်ကူး ရဟန်းဝတ်ဂိုဏ်း ချင်းမိုင်မှာ...
မန္တလေးခရိုင်အတွင်း အမည်စာရင်း မပေါက်သည့် ကျူးကျော်...
သင့်မှာ ဘယ်လိုအကျင့်စရိုက်ရှိလဲ ?
“ ဒီဘဝမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ဖို့ ကျွန်...
နဂါးကြီးကြိုက်တဲ့ ယွမ်တစ်သိန်းတန် မြန်မာသတို့သမီး
အလွန်အောင်မြင်သူအဖြစ် ခံယူမထားသည့် ဂမ်မာအာတာတန်
ရေချိုတွင်ပျော်သော သြစတေးလျမှ ဧရာမ ရေငံမိကျောင်း
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စ သမ္မတနှင့် ကြံ့...
တနင်္သာရီတိုင်း NLD ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင် ၁၇ ဦး တာဝန်မှ...
KTV နှင့် Club များတွင် လုပ်ကိုင်သူများအတွက် အလုပ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် သတိပေး...
ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက် ရင်ခုန်နေတဲ့ ယွန်းယွန်း
ထိုင်းနိုင်ငံ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို နိုင်ငံခြားရေးဌာန ...
ကမ္ဘာ့အ၀ဆုံး မက္ကဆီကို အမျိုးသား ကွယ်လွန်
ဘင်္ဂါလီများအား ဇွန်လ တတိယပတ်အတွင်း သန်းခေါင်စာရင်း ...
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း နှစ်ဖက်အစိုးရ သဘောမတူညီလျှ...
သင့်ဘက်က ဖွင့်ပြောသင့်ပြီဆိုတာ သေချာစေတဲ့ အကြောင်း...
Nang Khin Zay Yar - Black Fashion
RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးသွားသော လားဟူရွာသား(၉)ဦး ...
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့တော့မှာလား
၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြုပြင်ရာတွင် သမ္မတဖြစ...
Shwe Sin - Hot Collection
Miss Asia Pacific World Myanmar 2014, MayMyatNoe
May Grace Perry - Red Hot Beautiful Myanmar Model
အမျိုးသားတွေ သူ့ချစ်သူကို လမ်းခွဲတတ်တဲ့ အကြောင်းအရ...
"တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုလည်း ရှာတတ်ရမယ်" - ရွှေေ...
Khin Thazin & Beautiful Fashion Dress
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင်…(78) ချက်ထဲက ဘယ်န...
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာ တကယ် သိမ်းလိုက်ပြီ
ရန်ဘက်နှင့် မိတ်ဘက်ရှိနေသည့် ကြိုးတန်းပေါ်က မြန်မာန...
အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုလမ်းစဉ် ပြန်သုံးသပ်ချိန်...
ထိုင်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်က အတွေးများ
နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် ဗုံးနှစ်လုံးပေါက်ကွဲ အနည်းဆုံး...
ရာသီလာချိန် အမျိုးသမီးတွေ တွေးလေ့ရှိတဲ့ အရာများ
မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာက မြင်တဲ့အမြင်တွေပြောင်...
နိုင်ငံတွင်း မငြိမ်သက်မှုများကို နှိမ်နင်းရန် ထိုင်...
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ပြည်သူများ လက်မှတ်ရေးထိုး ဆန္ဒ...
၈၈ မျိုးဆက်နှင့် ပွင့်လင်းအဖွဲ့အား နိုင်ငံရေးစားဖာ...
ဒီမိုကရေစီ ချောက်ထဲကျရန် လက်တစ်လုံးအလို
Myanmar New Model - Khay Sett Thwin
တပ်မတော်က အာဏာနှင့်အခွင့်အရေးကို မမက်မောဘဲ တိုင်ြး...
သောင်းကျန်းသူများ မကြာခဏ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်နေသည့်...
မြောက်ကိုရီးယား ပြုံယမ်းက တိုက်ပြိုကျမှု ကင်ဂျုံအမ်...
မိုးရွာမှ ရေ အဝ ချိုးရသူများ
အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဘယ်လိုထိတွေ့မှုပုံစံ အနိုးကြွစေဆ...
Saung Yon San -Hot Photos Collection
အမြန်လမ်းနှင့် မိုးသည်း ည
Nwe Darli Tun - Beautiful Collection
စတာလင်ပေါင် ၂၅သန်းကို သဲ့ယူသလိုရတော့မယ့် Eurovisio...
စာပေပျောက်လျှင် လူမျိုးပါပျောက်သွားနိုင်သည့်အတွက် ...
တရုတ်ရေတပ် သင်္ဘောတွေ မြန်မာနိုင်ငံလာမည်
ဗီယက်နမ်က တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆူပူမှု အနည်းဆုံး လူ ၂ဝ ...
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်သေဆုံးပါက ကုမ္ပဏီနှင့်စစ်...
Miss Jue San Thar & May Myat Noe
တစ်မိုင် တစ်ဦး အမြန်လမ်း
အလုပ်မှာ လစာတိုးဖို့အတွက် ကိုယ်ကြိုးစားရမယ့် အချက်...
အမြန်လမ်းတွင် သေဆုံးမှုစံချိန်တင်ခဲ့သည့် ရာဇာမင်း ယ...
မျောက်မင်းစွန်းဝူခုံး သရုပ်ဆောင် မြန်မာနိုင်ငံလာမည်
လူကို ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ရုပ်ပိုရင့်စေတဲ့ အစားအသောက...
၀နယ်မှာ အချုပ်အခြာ အာဏာ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သလား
Most Popular Myanmar Models
“စန္ဒကိန္နရီ ရွှေဆံပင်တံတား” ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမည့် ဂ...
အချိန်ခရီးသွားသူတွေ တကယ် ရှိခဲ့လေသလား။
မိန်းမကိုယ် မပါဘဲ မွေးလာသည့် အမျိုးသမီးများအတွက်ေ...
မြန်မာ့နွေဦးနှင့် ဒီမိုကရက်တစ် ရီဆက်ရှင်
နိုင်ဂျီးရီးယား ကျောင်းသူ ၂၀၀ ကျော် ပြန်ပေးဆွဲခံရမ...
မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်နှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး
မျိူးစောင့်ဥပဒေ မူကြမ်း အဖွဲ့အစည်း ၉၀ ကျော် ကန့်ကွက်
မစ္စယင့်လပ်ရှင်နာဝပ် ကို ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးက နှုတ်ထွက...
တရားဝင် ကွာရှင်းခွင့် လျှောက်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ...
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွင် ၈၈ မျိုးဆက...
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်များအပေါ် ပြည်သူလူထုက စ...
အမြန်လမ်းမပေါ်တွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုများ အရေးပေါ်ကုသရေး ...